व्यवसायमा रमाएका तिर्थ ! – Ujyaaloraibar
व्यवसायमा रमाएका तिर्थ !
उज्यालोरैबार	। २०७७ मंसिर ९, मंगलवार १२:०९
सुर्खेत । दैलेख दुल्लुनगर पालिका –११ तोरियाँ पाल्त जन्मथलो भएका २८ वर्षिय यूवा ब्यवसायी तिर्थ सुनारले विरेन्द्रनगर नगरपालिका –४ एरिचौक सुर्खेतमा सुनचाँदी ब्यवसाय गर्छन् । यहाँ करिव ८ वर्षदेखी ब्यवसाय गर्दैआएका छन् ।
बुवाले तिर्थलाई सरकारी जाँगिर खुवाउनका लागि पढाईतिर मात्रै केन्द्रित गरे पनि समय परिवेशले उनी फेरी बुवाले गर्दै आएको पुरानो ब्यबसाय ९सुनचाँदी पसल०तिर मोडिए । कारण थियो, पढ्दा पढ्दै बुवाको निधनपछि एक वर्ष तल्लो डुंगेश्वरमा रहेको निमावीमा शिक्षक भए । शिक्षक भएसंगै विवाह बन्धनमा बाँधिए । शिक्षक पेशाले कमाईले घरपरिवारलाई धान्न हम्मेहम्मे भयो । उनलाई परिवारबाटै बुवाले गरेको ब्यवसायमा फर्कन दवाव आयो । बुवाबाट सिकेको सिपलाई उनले फेरी सुरु गरे । सुरुमा अछामको कमलबजारमा थोरै रकमबाट ब्यवसाय गरे ।
२०७७ मंसिर ९, मंगलवार १२:०९
सुर्खेत । जनयुद्ध, युद्ध तथा विभिन्न कारणले वेपत्ता भएका परिवारका सदस्यहरुलाइ वेपत्ता पारिएका व्यक्तीकोे छानविन आयोगले परिचयपत्र दिने भएको छ । मंगलबार वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा वेपत्ता भएका परिवारका सदस्यहरुलाइ परिचयपत्र दिने आयोगले जनाएको छ । आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता डाक्टर गंगाधर अधिकारीका अनुसार यस आयोगलाइ २०७१ सालमा स्थापनामा […]
२०७७ आश्विन २४, शनिबार १५:०२
बलत्कारीलाई कडाभन्दा कडा सजायको माग राख्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन
२०७७ माघ १३, मंगलवार १७:५१
नातिको सम्झनामा विद्यालयमा अक्षय कोष स्थापना
२०७८ असार २१, सोमबार १०:५२
काँग्रेस दैलेखका पूर्व पार्टी सभापति थापाकाे निधन
२०७७ कार्तिक २८, शुक्रबार १४:३०
नागरिक समाजका अगुवाहरुसँग कानुनी सचेतना